Ny maimaika amin’ny faritra samihafa amin’ny vatana dia manondro aretina samihafa. – Noor Health Life
Ny maimaika amin’ny faritra samihafa amin’ny vatana dia manondro aretina samihafa.
Ny fizotry ny fidiran’ny mony amin’ny vatantsika dia voajanahary fa raha manomboka mihamitombo amin’ny faritra iray izy ireo dia manondro aretina.
Raha mipoitra ny mony amin’io faritra io, dia famantarana ny fahasimban’ny glanda adrenal izany.
Ny fanerena be loatra amin’ny asa sy ny adin-tsaina dia mety miteraka maimaika amin’ity faritry ny vatana ity ihany koa.Famantarana ny hery fiarovan’ny hery fiarovana koa izany ka aza manahy ary mitony.
Noor Health Zindagi dia miezaka ny hahazo ny tsara indrindra avy aminao sy ireo dokotera lehibe miaraka amin’ny Noor Health Zindagi. mpandidy Mpanolo-tsaina. Profesora. Ny Working Noor Health Life dia manampy ny mahantra ary mangataka anao izahay handray anjara amin’ity asa ity ary hanohana ny Noor Health Life. hamaky bebe kokoa.
Raha miseho eo amin’ny tratra ny maimaika dia midika izany fa tsy mandeha tsara ny système digestif ka voatery hanova ny sakafo.
Ny tsy fahampian’ny vitaminina no mahatonga ny maimaika.Tsy midika akory izany fa tokony hanomboka hihinana fanampin-tsakafo ianao fa manonitra ny tsy fahampiana amin’ny alàlan’ny sakafo.
Ny fiakaran’ny siramamy ao amin’ny vatana no anton’izany, noho izany, aza mampiasa siramamy sy mofo be loatra, fa mianina amin’ny legioma sy voankazo.
Ambonin’ny tongotra sy ambany ny torso
Raha mampiasa savony tsy mifanaraka amin’ny hoditrao ianao dia miseho amin’io faritra io ny maimaika, ka jereo ny savony, ny antony iray hafa mahatonga izany dia ny aretin’ny hoditra.
Ny tapany ambony sy afovoany amin’ny andilana
Raha tsy ampy torimaso ianao dia miseho amin’ity toerana ity ny mony, toy izany koa ny fihinanana sakafo be kaloria.
Olana amin’ny fandevonan-kanina ihany koa no mahatonga ny maimaika, izay midika koa fa tsy mihinana sakafo tsara ianao. Ny antony sy ny fitsaboana ny pimples.
Matetika isika no tsy mahafantatra ny antony mahatonga ny mony amin’ny tarehy.Tsy misy antony manokana hiforonan’ny nify fa mety ho maro ny antony mahatonga izany.Ny sasany amin’ireo antony sy ny fitsaboana azy dia toy izao manaraka izao. Andao hiresaka momba azy ireo. Lazao anao ao antsipirihany.
Ny tsy fahampian’ny sakafo voalanjalanja sy ny fihinanana kôbhydrate madio be dia be dia mety miteraka mony amin’ny taona rehetra. Tena ilaina ny sakafo voalanjalanja sy ny fihinanana tsy misy glycemika ambany. Milaza ny mpikaroka fa ny haavon’ny insuline ao amin’ny ra dia mety hitarika amin’ny famokarana menaka be loatra. ary ny follicles mamaivay. Azonao atao koa ny manao ny sakafo ho salama sy voalanjalanja.
Teknolojia maoderina antsoina hoe blue light therapy no ampiasaina ankehitriny mba hanesorana ny mony amin’ny tarehy.Ireo taratra manga mahery vaika ireo dia miditra amin’ny hoditra amin’ny alàlan’ny follicles ary mamono ny bakteria. Mety hiteraka mena eo amin’ny hoditra izany saingy vetivety, ka raha avelanao ny teti-bola. , ity fitsaboana ity dia tsara indrindra amin’ny fanalana mony sy hahazoana hoditra mazava.
Ny menaka hazo dite tena malaza sy malefaka raha oharina amin’ny peroxide benzoyl dia ilaina amin’ny fitsaboana ny karazana akne rehetra amin’ny taona rehetra. Ny menaka hazo dia manana fananana antiseptika voajanahary izay manadio ny pores sy ny hoditra mihidy. ary mampihena ara-boajanahary ny fivontosan’ny hoditra.Ity menaka ity koa dia ampiasaina amin’ny lotion maro, fanasan-tava ary savony.
Araka ny voalazan’ireo manam-pahaizana momba ny hoditra sy ny fahasalamana dia ahena ny fatran’ny sira ao anatin’ny sakafo.Noor Health Life dia nilaza fa anisan’ny mahatonga ny mony ny fihinanana sodium be dia be. Tandremo tsara rehefa misakafo. Tsara kokoa ho anao ny mihinana latsaky ny 1500 mg ny sodium isan’andro.
Misy fiantraikany ratsy eo amin’ny fiasan’ny hormone ny stress.Tsy misy fiatraikany mivantana amin’ny hoditra ny stress fa isaky ny manahy ianao dia misy mony mipoitra eo amin’ny hoditrao.Mitombo izay misy fiantraikany amin’ny glands izay mamoaka menaka ao amin’ny vatana.Méditation,exercise na hafa. fomba azo ampiasaina hampihenana ny adin-tsaina izay afaka mampitony ny toe-tsainao.
Mba hahazoana vokatra tsara dia zava-dehibe ny manatona manam-pahaizana momba ny hoditra tsara amin’ny fanovana sahaza ny sakafo sy ny fomba fiainanao.Areti-mifindra miseho amin’ny hoditra.
Ny famantarana voalohany amin’ny aretina sasany dia miseho eo amin’ny hoditra.
Ny hoditra no taova lehibe indrindra amin’ny vatan’olombelona nefa fantatrao ve fa maminany aretina koa izy?
Eny, ny famantarana voalohany ny aretina sasany miseho eo amin`ny hoditra.
Saingy fantatrao ve ny soritr’aretina asehon’ny hoditra amin’ny aretina isan-karazany?
Heverina fa ny bursitis dia fanehoan-kevitra amin’ny fisotroana ronono aorian’ny fihinanana trondro, saingy mandà izany ny siansa momba ny fitsaboana, raha ny marina, mitranga izany rehefa mipoitra amin’ny voajanahary ny hoditra. eo amin’ny hoditra raha ny marina dia fanafihana ny selan’ny hoditra avy amin’ny hery fiarovan’ny vatana, izay ao amin’ny melanine, ilay pigment izay mandoko ny hoditra.Mety ho famantarana ny aretina autoimmune toy ny aretin’ny tiroida ihany koa izany.
Mamaivay ny hoditra
Matetika ny tasy maina sy mangidihidy ary mena eo amin’ny hoditra no miseho eo akaikin’ny tendany na ny kiho. Aretin’ny hoditra tena mahazatra izy io ka mety hisy fiantraikany amin’ny ankizy sy ny olon-dehibe, nefa mety ho famantarana ny olana ara-pahasalamana ihany koa. Araka ny fanadihadiana nataon’i Etazonia, ny olona voan’ny fahaketrahana na ny adin-tsaina dia mety ho voan’ny aretina aloha, fa ny fitsaboana ny dermatitis dia manatsara ny fahasalamana ara-tsaina ihany koa.
Mety hisy fiantraikany amin’ny fikorianan’ny ra sy hanimba ny nerveuse ny siramamy avoakan’ny rà maharitra, ka hisy fiantraikany amin’ny fahafahan’ny vatana manasitrana ratra, indrindra eo amin’ny tongotra, izay mety hiteraka diabeta, antsoina koa hoe fistula.
Amin’ity aretin’ny hoditra ity dia miseho amin’ny hoditra ny peeling ary mangidihidy sy mangidihidy, saingy manondro olana ara-pahasalamana lehibe ihany koa izy ireo. Araka ny voalazan’ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana, ny olona manana io aretina io dia manana 58% ambony kokoa amin’ny aretim-po ary 43% ambony kokoa amin’ny fahatapahan’ny lalan-dra. Milaza ny manam-pahaizana fa ny psoriasis sy ny fivontosan’ny rà ao amin’ny lalan-dra dia vokatry ny areti-mifindra ary io zavatra io no mampifandray azy roa.
Voamavo mavokely na fanamiana
Ny aretina dia mahatonga ny hoditra ho mena sy mavokely mipoitra, ny ankamaroan’ny olona dia tsy mitsabo azy io satria tsy heveriny fa mampidi-doza izany, saingy ny fanadihadiana vaovao dia nahatsikaritra fa ny toe-javatra dia nitombo 28% ny mety hisian’ny dementia amin’ny vehivavy. ny taona dia mihoatra ny 50 na 60 taona.
Ny tongotra misy hoditra maina sy triatra
Mety ho famantarana ny olana amin’ny fihary tiroida (indrindra fa ny fihary akaikin’ny fantsona), indrindra rehefa tsy misy ilana azy ny fikarakarana ny hamandoana amin’ny tongotra. Rehefa misy olana amin’ny fihary tiroida dia tsy afaka mamokatra hormonina tiroida izay miasa amin’ny tahan’ny metabolika, tosidra, fivoaran’ny hozatra ary rafi-pitatitra. Araka ny fanadihadiana nataon’ny mpitsabo, vokatry ny olan’ny Thai Ride dia lasa maina be ny hoditra, indrindra fa manomboka mivaky ny hoditry ny tongotra ka tsy mihatsara intsony ny manatona dokotera.
Ny tsemboka be loatra amin’ny tanana dia mety hitarika amin’ny aretin’ny tiroida ary koa ny hatsembohana be loatra, ka lasa mavitrika kokoa ny fihary hatsembohana. Ny ankamaroan’ny olona dia mahatsapa io olana io amin’ny faritra iray na roa amin’ny vatana toy ny handriny, felatanana na tongotra. Azon’ny dokotera atao ny mandinika azy io ary manome fitsaboana.
Vovonana mainty na molaly
Amin’ny ankapobeny dia mety ho famantarana ny homamiadan’ny hoditra ny molekiola mainty misongadina, ary mampitombo ny mety hisian’ny homamiadan’ny nono, ny tatavia ary ny voa. Araka ny voalazan’ny manampahaizana dia ilaina ny mandeha tsy mandeha amin’ny masoandro, mijanona ho mavitrika, sakafo ara-pahasalamana ary miala amin’ny alikaola mba hisorohana ny homamiadana mahafaty toy izany.Raha mila fanontaniana sy valiny bebe kokoa dia mifandraisa amin’ny Noor Health Life amin’ny alàlan’ny mailaka sy amin’ny can. noormedlife@gmail.com